Church – 2azụ
Gịnị mere na Chọọchị Katọlik na otu, ezi ụka?
Mbụ, ọ bụ uru na-arịọ: gịnị ka Ndị Kraịst na-ekwu mgbe ha na-ekwu na otu, ezi ụka?
The Triumph of the Church site Andrea Bonaiuto si Florence
agụnye, anyị pụtara ndị ahụ kwere na Nsọ Atọ n'Ime Otu–Chineke Nna; Jesus, Ọkpara Chineke; na Mmụọ Nsọ–na ha kweere na Jizọs kụziiri N'oge ozi. Otú ọ dị, anyị aghaghị ịkpachara anya n'ihi na e nwere ìgwè dị iche iche nke mmadụ na-eche onwe ha Ndị Kraịst, ma onye nwekwuru ha ịkọwa na echiche ndị na-aga ebe dị anya ọ bụla Jizọs kụziri.
Ya mere, “The Church” -agụnye ndị na-eso Jesus na-akụzi (dị iche iche degrees), ma bụ ihe Jizọs bu n'obi? Iji zaa ajụjụ ahụ, ọ dị mkpa inyocha ihe Sciptures.
na Oziọma Matiu (16:18) Jizọs na-ekwu na Pita, "Ana m agwa gị, ị bụ Peter, bụkwa n'oké nkume a, m ga-ewu chọọchị m, na ike nke hell agaghi-enwe ike imegide ya. "Mgbe e mesịrị Matiu 28:20, Jesus assures His followers He would remain with them “always, na njedebe nke afọ. "N'otu aka ahụ, in John’s Gospel, Jesus ekwe nkwa na Mmụọ Nsọ ga-adị na Church ruo mgbe ebighị ebi (14:16).
E nwere ọtụtụ amaokwu Baịbụl ndị metụtara Jehova iguzobe "otu alaeze nke a ga-agaghị ebibi ebibi." (Ọmụmaatụ, ịhụ Akwụkwọ Daniel (2:44), Isaiah (9:7) na Oziọma Matiu (13:24).)
N'ihi na ndị na kpatara, anyị pụrụ ijide n'aka na Church Jesus founded-onye, ezi Church-enwewo dịghị mgbe daa na guzoworo nọgidere si Saint Peter ụbọchị ruo taa ga-anọgide na ugbu "ke kpukpru emana, ebighebi ruo ebighebi" (dị ka St. Paul dere ya Letter ndị Efesọs 3:21).
Nke a pụtara na Church ozizi lanarịrịnụ emebibeghị n'ihi na ha e nyere ya site Kraịst n'onwe ya kwuru, "Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga agabiga " (ịhụ Matiu 24:35 na onye amụma Isaiah 40:8).
Ya Akpa Letter Timoti (3:15), Saint Paul goes so far as to call the Church “the pillar and bulwark of truth.” Because His Church has been professing the same doctrine for nearly 2,000 afọ, e nwere onye na Iweputa akụkọ ihe mere eme nzọ ụkwụ na-ejikọ ndị mbụ obodo-eso ụzọ Jizọs ka ya dịkọrọ ndụ onwe. Ya mere, Ọ ga-ekwe omume ka Chọpụta ozizi nke otu n'ime ndị dịkọrọ ndụ Christian ozu azụ site n'oge ruo n'oge nke onyenchịkwa.
Niile nke taa multiple na iche iche Kraịst obodo, naanị Catholic Church bụ ike ịnwapụta ya-ekwu nke bụ ezigbo ya site Apostolic inwe, ma ọ bụ na unbroken akara nke ndị bishọp nke ikwesị ntụkwasị obi jee ndi ozi kụziri site na narị afọ mbụ, rue ta. Nke a bụ eziokwu a na-akwado òtù ndị Christianity n'oge ochie akụkọ ihe mere eme dere-ihe odide ndị Early Church Fathers–nke na-amalite akwụkwọ ozi ekewetde ikom bụ ndị mụtara Okwukwe kpọmkwem site Ndịozi. Akwụkwọ ozi ndị dị mfe online ma ọ bụ mgbe ọ bụla ezi n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ na-ere akwụkwọ.
-Abụghị ndị Katọlik na-agọnahụ mkpa rijuru, ozizi Church, na n'ozuzu anya na Bible dị ka ya kpọchiri isi iyi nke eziokwu, ikwere na Bible inwe afọ interpretive.
N'ụzọ dị, na echiche na-gbaghara ihe site n'Akwụkwọ Nsọ, ya onwe ya. Lee Saint Pita Nke abụọ Letter (1:20-21).
Ọzọkwa, ọ na-ọtụtụ ndị ghara ikwe na eziokwu na e nwere ìgwè ndị "Bible-nanị" ịrọ òtù na fundamentally na-ekwekọrịtaghị ihe Bible na-akụzi! Ọ bụrụ na onye nkọwa mmadụ pụta nke Ozizi Kraịst bụ ikom na-ezughị (na ịbụ nkọwa nke a mmadụ, ọ ga-abụ) mgbe ahụ mere eme na Church dere bụ uru nke ukwuu wee ghọta n'ụzọ na ndi ozi na ha na-anọchi kọrọ isi nrọ Akwụkwọ Nsọ na dịrị ndụ na ndị Faith.
Life of Saint Stephen: Nhọpụta na-enye Onyinye nke ebere site fra Angelico nyere aka site Benozzo Gozzoli
Ndị dere nke a Early Church Fathers ike mee ihe atụ nke Catholic Church nkuzi continuity, nke a nọgidere na-enwe n'agbanyeghị mmadụ njehie na mmehie, mkpagbu, na omenala ndị na gaara eme ka ihe nkịtị na alụmdi na-ahapụ ya isi ụkpụrụ ogologo oge gara aga. Ama ọkọdọhọ n'elu continuity nke Catholic Church (na kpọmkwem nke Church of Rome) na narị afọ nke abụọ, Saint Irenaeus of Lyons called her “the greatest and most ancient Church known to all” in Against Heresies 3:3:2.
Rịba ama na a dịgasị iche iche nke echiche ndị e Katọlik karịrị afọ na akụkụ nke na-emegide chọọchị na-anwa ịkọwa ya si malite-ma ọ bụ -akọwa ya ka mmadụ pụrụ ikwu. Kacha nkịtị otú ahụ tiori alleges Katọlik malitere ịdị na narị afọ nke anọ, gburugburu oge ahụ Akwa Edidem Constantine Akwa nkwado iwu Christianity n'Alaeze Ukwu Rom dum. Nke a tiori na-ekwu na a akụkụ buru ibu Christian Church mechara ghọọ ndị rụrụ arụ site na-ekpere arụsị mmetụta n'ihi na a nnukwu mwubata nke atọghata. N'ezie, ndị na-agaghị emerili ihe mgbochi nye nchepụta echiche a bụ ọnụnọ nke Catholic ozizi na Ecclesiastical odide na predate Constantine, na akụkọ ihe mere eme odide nke Nna Chọọchị Mbụ Hà na-egosi na nke a n'ụzọ dị ike.
Life of Saint Stephen: Ịchụpụ na nkume tụgbuo site fra Angelico nyere aka site Benozzo Gozzoli
The n'ụzọ pụtara ìhè Catholicity of Christianity si edemede oge ochie dere bụ irrefutable.
Tụlee, ọmụmaatụ, Saint Ignatius nke Antiọk, ndị na akpa gburugburu afọ 107. Ignatius bụ nwa akwụkwọ nke ndị ozi bụ Pita na Jọn ma jiri Church si Oriri Nsọ ozizi mbuso jụrụ okwukwe ekwetaghị na incarnation.
O nwere ihe ùgwù nke ịbụ ndị mbụ so dee on ndekọ na-eji okwu ahụ bụ "katọlik" dị ka a kwesịrị ekwesị aha maka Church. "N'ebe ọ bụla a bishop na-egosi, ka ndị na-e,"O dere,; "Dị nnọọ ka ebe ọ bụla Jesus Christ bụ, e nwere ndị Catholic Church. "
Coincidentally, Antioch, Ignatius 'bishopric, eme kwa ka ebe-eso ụzọ Kraịst na-akpa na-akpọ "Ndị Kraịst" (-ahụ mwube nke onyenchịkwa 11:26).
Ofufe dịịrị Nsọ Atọ n'Ime Otu site Albrecht Durer
Ndị mbụ e dere ojiji nke "Atọ n'Ime Otu" sitere Antioch, kwa. -Apụta n'akwụkwọ a akwụkwọ ozi nke ọzọ bishop, Saint Theophilus, na banyere 181 (ịhụ ka Autolycus 2:15), Saint Irenaeus dere, "Ọ bụrụ na Jehova si dị iche na nke Nna, olee otú O n'ụzọ ziri ezi iwere achịcha, nke bụ nke otu ihe e kere eke dị ka anyị onwe anyị, na-ekwupụta ya na-adị Ya Isi, na kwuru si ngwakọta n'ime iko ahụ bụ Ya ?" (ịhụ heresies 4:33:2).1
Ya mere, Olee otú ndị ọzọ dị ná mma ha eketre na Church of Rome na Ignatius 'ekwupụta ya preeminence? Ọ kpọ ya "Chọọchị nke esetịpụ etieibuot ke ebiet nke mba ndị Rom ...;"Na wee gaa n'ihu ịsị, "Ị nweere ya anyaụfụ dịghị onye, ma ndị ọzọ ị nọwo na-. Achọrọ m naanị na ihe ị enjoined gị ntụziaka nwere ike ka di ire " (Ndị Rom, Address; 3:1).
Irenaeus depụtara ndị bishọp nke Rom ruo oge ya, N'ikwu, "Na nke a iji, na site n'ozizi ndịozi nyefere ndị na Church, -ekwusa ozi nke eziokwu ahụ arịdakwuruwo anyị " (ịhụ heresies 3:3:3).
Ụfọdụ nwere ike tua ujọ site Ignatius 'akpọ aha Marian ozizi na otu ume dị ka n'Obe? "The amaghị nwoke nke Mary,"O dere,, "Ya na-amụ, na kwa ọnwụ Onyenwe, e zoro ezo isi uwa nka:-three omimi àmà siri kwusara, ma zọputa na-agbachi nkịtị nke Chineke " (ịhụ Ndị Efesọs 19:1).
N'otu aka ahụ, ọ na-ede, "Mary, betrothed otu nwoke ma o ka a na-amaghị nwoke, n'irube isi, e mere ihe kpatara nke nzọpụta nke ya na maka dum agbụrụ ụmụ mmadụ. ... N'ihi ya, e ji kee ngwugwu nke Iv nupụụrụ e tọpu site ná nrubeisi nke Mary " (see Heresies 3:22:4).
taa, ihe ga-ndị Katọlik na ndị na-abụghị ndị Katọlik na-akpọ onye na-ahuta Oriri Nsọ dị ka aru nke Kraist, ja Church of Rome ya zie ihe kara, na nsọpụrụ ofufe-omimi nke Mary amaghị nwoke?
Gịnị mere otu ikwubi ihe ọ bụla dị iche iche banyere otu nwoke na ya dị ka kpọrọ ha dịkọrọ ndụ bụ ndị na-ekwu ma na otu ihe iri na iteghete na narị afọ gara aga?